Abathengisi: Zazi ezi zinto ziphambili ekuthengeni iBritane | Martech Zone
Ngaba uyibonile into endiyenzileyo apho? Le Midwesterner isebenzise upelo lwaseBritane lwe ukuziphatha endaweni yokuziphatha. Ndifuna nje ukubonisa wonke umntu ukuba ndingumntu onjani… okanye hayi. Khange ndikhe ndiye e-United Kingdom ngaphandle kwelifa laseScotland nelaseBritane kwicala losapho lukaMama. (Yabona loo nto? Ndiyenzile kwakhona!)
Kulungile, hlekisa ecaleni (doh!), Olu lolunye ulwazi oluhle olufakwe CM uphawu. Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba oku kungumboniso ochanekileyo wokuziphatha kokuthenga ezidolophini apha eUnited States.
Ukuqonda indlela yokuziphatha yabathengi ayisiyokufumana nje ukuba zeziphi iimveliso okanye izipho zokwazisa isibheno kubemi. Ukusuka kwimbono yomthengisi, kufanele ukuba kube malunga nokuhla ukuya kwizinto ezithile nokuba kutheni umthengi esenza into ethile kwi ivenkile ekhethekileyo yezipho, indlela abantu abelana ngayo ngolwazi omnye komnye, kwaye zeziphi iinkcubeko okanye iimpembelelo zentlalo ezisebenzayo ekubumbeni umbono wabo. UMax Baumber
Nalu uhlengahlengiso lweendlela zokuziphatha onokuzigcina engqondweni njengoko uphuhlisa iindlela zakho zokuthengisa phesheya (kwaye nalapha):
Abathengi base-UK banyanisekile -Bamba idatha yabo, gcina uqhagamshela, kwaye wenze iinzame zentengiso ezizezakho.
Ixabiso labathengi base-UK liSimahla, ukuhanjiswa okuthembekileyo kunye nokuBuyiswa kweMveliso -Sombulula imiba yokuhanjiswa kunye nokubonelela ngembuyekezo yasimahla ukuze uchume kwintengiso ekwi-Intanethi.
Iimveliso zabaphandi base-UK kwi-Intanethi -Iqinisekisa ukuba abathengi banokufumana ulwazi malunga neemveliso zakho kwi-Intanethi ngokukhangela, kwezentlalo, kunye nakwindawo ekugxilwe kuyo yemveliso.
Iivenkile zisabalulekile kuhambo lokuthenga lwaseBritane Dibanisa iivenkile zakho ezikwi-Intanethi nakwiintanethi ukuze ufumane amava okuthenga ngaphandle komthungo kunye nomvuzo kwivenkile yokuthenga kunye nokunyaniseka.
Ulwazi lweMveliso yeeNtengiso eziDibeneyo kunye nokukwazi ukubona iiMveliso zibalulekile -Nikezela ngamava agudileyo asesitolo kubathengi ngokutyala imali kuqeqesho kunye nokuphuhlisa abameli bokuthengisa ezivenkileni.
Millennial Brits Funa ukuqinisekiswa kwiiNethiwekhi zeNtlalo -Yandisa ubukho begama lakho kwimidiya yoluntu.
Ukuthengwa kweselfowuni kuxabiseke kakhulu kumaQela aBasebenzisi aBancinci -Phucula amava ewebhusayithi yakho ukunyusa amaxabiso okuguqula abathengi abancinci.
Nantsi infographic eqaqambileyo, Imikhwa yokuthenga eBrits kunye nokuziphatha Abathengisi kufuneka bazi.
tags: britBritishindlela yokuziphatha yokuthengaukuthenga isimiloIvenkile ezivenkileniisimilo sokuthenga seminyaka eliwakaindlela yokuziphatha yokuthengaukuqinisekiswa kokuthengaUkuthengisa izinto ozithengisayoezivenkileniukuqinisekiswa kweendaba ezentlaloukabathengi bakwa-ukuk ukuthenga ukuthembekaiunited Kingdom
Ukuhamba komsebenzi: Ezona ndlela zilungileyo zokuZenzekelayo kwiSebe lokuThengisa lanamhlanje